သာ .frm နှင့် .ibd ဖိုင်တွေရရှိနိုင်သည့်အခါက MySQL ကျောက်ပြားကို Recover – တေလာ Lopes ツဘလော့
သာ .frm နှင့် .ibd ဖိုင်တွေရရှိနိုင်သည့်အခါက MySQL ကျောက်ပြားကို Recover
ဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးရန် “က MySQL အမှား #1146 - စားပွဲတင်မတည်ရှိပါဘူး” ဖိုင်တွေရွေ့လျားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ .idb (InnoDB) တိုက်ရိုက် directory များအကြား (tablespace).
Muitos dos problema que temos são problemas que criamos. Eu tinha acabado de preparar um Site usando WordPressepensei: que tal ver como isso funciona no PHP 7? အိုကေ, como meu WampServer usava PHP 5.6, então tivea“feliz” ideia de fazer um upgrade do WampServer 2.5 (Apache-2.4.9, Mysql-5.6.17, Php5.5.12) အတွက် WampServer 3.0.6 (Apache2.4.23, Mysql5.7.14, Php5.6.25ePhp 7.0.10).
ရှင်းလင်းသော, comecei pelo backup, mas meu grande vacilo foi optar por não exportar o SQL do tal Site, ao invés disto, apenas fiz uma cópia dos arquivos do MySQL (mysql/data)eda aplicação (www/site). Estava confiante que iria funcionar, como das outras vezes.
MySQL အမှား #1146 – Table <NOME_DA_TABELA> doesn’t exist
က MySQL အမှား #1146 – Table <NOME_DA_TABELA> doesn’t exist
Chegueiaver algumas soluções simples, mas vou descrever aquiaúnica que realmente funcionou para mim, apesar de parecer bem mais complexa, encontrada no Post “Restoring table(s ကို) in MySQL database when frm or ibd files are available only“.
Antes, သို့သော်,atítulo de conhecimento, vale lembrar que em relação ao tipo InnoDB, o MySQL guarda sua estrutura em arquivos .frmeseus dados em .ibd. Chega de teoria, vamos ao que interessa!
လှမ်း 1: Recrieaestrutura dos arquivos .frm
Esta ferramenta irá extrairaestrutura de dadosegerar o script SQL de criação da tabela. ဤအတွက်, baixe o “MySQL Utilities” (algo como mysql-utilities-1.6.4-winx64.msi)einstale-o.
Abra o console (အမိန့် / DOS)eutilize comando CD para mover-se o diretório padrão da instalação (algo como C:\_Program Files\_MySQL\_MySQL Utilities 1.6\_). Note que dentro deste diretório existe o executável mysqlfrm.exe.
3. ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ “Browser…”eselecione seu arquivo .frm; အီး
4. ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ “Upload”eo script de criação da tabela será exibido na tela.
mysqlfrm --server=root@localhost --port=3307 ""ကို C:\_wamp\_bin\_mysql\_mysql5.6.17\_data\_meubanco\_wp_posts.frm" > "ကို C:\_recovered_wp_posts.sql"
Não useaporta do MySQL! Escolha qualquer outra disponível. Note que o comando redirecionaasaída para um arquivo .sql que é salvo no caminho especificado (အဘယ်သူမျှမကိစ္စ, ကို C:).
လှမ်း 2: Recrieatabela no seu Banco de Dados
Em uma base de dados nova, crie uma tabela com o script gerado no Passo 1. Eu particularmente instalei uma versão limpa do WampServereutilizei o PHPMyAdmin (ကို http://localhost/phpmyadmin/) para criarabase de dadoseimportar o script SQL criado no passo 1 (recovered_wp_posts.sql). Este script irá criar2arquivos no diretório da sua base de dados MySQL:
ငါ၏အမှုကိစ္စများတွင်, esses arquivos foram criados em ကို C:\_wamp64\_bin\_mysql\_mysql5.7.14\_data\_<MYDATABASE.GDB>. အခြားစကား, procure sua instalação do MySQLenote que no diretório ဒေတာ haverá sua base de dadoseos dois arquivos citados.
လှမ်း 3: Remova o novo arquivo .idb
လှမ်း 4: Copiar o antigo arquivo .idb
လှမ်း 5: Reativaratabela
Não se preocupe se receber alguns avisos, သို့သော်, pode ser que dê pane geral aparecendo o seguinte erro:
ဤကိစ္စတွင်အတွက်, isso aconteceu devidoaforma diferente que o mysql5.7.14 (NOVO) criaatabela padrão em relação ao Mysql-5.6.17 (ANTIGO), sem o ROW_FORMAT=compact.
ထိုအခါ, se você está usando MySQL >= ao mysql5.7.14, tudo que você precisa fazer é acrescentar ROW_FORMAT=compact na definição de criação da tabela.
# Starting the spawned server on port 3304 ... ERROR Attempting to stop failed spawned server.  ဖြစ်စဉ်ကိုက id = 6648.
# Source on localhost: ... connected. # Starting the spawned server on port 3304 ... ERROR Attempting to stop failed spawned server. ဖြစ်စဉ်ကိုက id = 6648.
အမှား: spawn server ကိုစစ်ဆင်ရေးပျက်ကွက်. ကိုယ်ပွား server ကိုအမှား: Unable to communicate with new instance. Process id = 6648.. ရှာဖွေရေးမှာရန်, run the utility again and အသုံး အ --verbosity option to view the messages from the spawned server and correct any errors presented then run the utility again.
အမှား: spawn server ကိုစစ်ဆင်ရေးပျက်ကွက်. ကိုယ်ပွား server ကိုအမှား: အသစ်ကဥပမာအားဖြင့်နှင့် ဆက်သွယ်. မရပါ. ဖြစ်စဉ်ကိုက id = 6648.. ရှာဖွေရေးမှာရန်, run the utility again and use the --verbosity option to view the messages from the spawned server and correct any errors presented then run the utility again. SUCCESS: The process with PID 6648 (child process of PID 7264) has been terminated.
File ".\_mysql\_utilities\_common\_t ကိုools.py", line 273, in get_mysqld_version
No caso específico do WordPress, você precisa remover do script que gerou o SQL obtidos em .frm, todas as entradas ‘DEFAULT ‘0000-00-00 00:00:00'', caso contrário, vai pegar o erro:
စုစုပေါင်း access: 21390
28 အောက်တိုဘာလ 2016 တေလာ Lopes	.frm, error #1146, error #1808, innodb, myisam, MySQL, row_type_dynamic, table doesn’t exist, tablespaces, wampaserver
12 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း “သာ .frm နှင့် .ibd ဖိုင်တွေရရှိနိုင်သည့်အခါက MySQL ကျောက်ပြားကို Recover”
အလွန်ကောင်းသောကောင်လေး! ဦးငါ့ကိုကယ်တင်! ဖြေရှင်းချက်မျှဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
2 နိုဝင်ဘာလ 2016 သို့ 18:43
သင်သည်အဘယ်သို့အောက်ပါ error message ကိုမြင်သောအခါလုပ်ဖို့: #1815 – ပြည်တွင်းအမှား. table ထဲမှာ LSNs reset မနိုင် “MYDATABASE.GDB”.”minhatabela”: data structure အကျင့်ပျက်ခြစားမှု.
ကို manually INSERT data ကိုဖျော်ဖြေဖို့ကဖြစ်နိုင်ပါတယ်? Como fazer isso?
10 de Fevereiro de 2017 သို့ 10:10
ကိုယ့် YOUUUUUUU ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သင်တစ်ဦး BIG က F ** ရှငျဘုရငျကိုပေးချင်. သငျသညျကြှနျုပျအသကျ dude သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်!!!!!
12 de Fevereiro de 2017 သို့ 19:58
Cristian ဦး ကပြောပါတယ်:
အမှား: spawn server ကိုစစ်ဆင်ရေးပျက်ကွက်. ကိုယ်ပွား server ကိုအမှား: အသစ်ကဥပမာအားဖြင့်နှင့် ဆက်သွယ်. မရပါ. ဖြစ်စဉ်ကိုက id = 6648.. ရှာဖွေရေးမှာရန်, အဆိုပါထပ်မံ utility ကို run အသုံးပြု –verbosity option to view the messages from the spawned server and correct any errors presented then run the utility again.
3 de Abril de 2017 သို့ 18:02
မင်္ဂလာပါ, သင်ပထမဦးဆုံးနည်းလမ်းကိုသုံးပြီးကြိုးစားနိုင် (https://recovery.twindb.com/) အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့. မဆို '' default '' 0000-00-00 MySQL port ကိုသုံးပါနှင့်သင့် .frm SQL ကနေဖယ်ရှားပစ်မထားပါနဲ့ 00:00:00''.
6 de Abril de 2017 သို့ 18:23
Marcos Junior Da Silva ကပြောပါတယ်:
လမ်း, အများအားဖြင့်ကိုယ့်စာပမြေားအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်ပါဘူး, ဒါပေမဲ့ဒီမှတ်ချက်ပေးရန်ရန်ရှိသည်!
5 de Abril de 2017 သို့ 0:00
ရဲဘော်အကြီးအ post ကို.
ရှင်းလင်းသော, ချုပ်သော, ပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော.
27 de Abril de 2017 သို့ 12:28
10 ဇူလိုင်လ 2017 သို့ 12:23
ဇွာ Felipe ကပြောပါတယ်:
17 ဇူလိုင်လ 2017 သို့ 23:55
ဒါဟာအများကြီးကူညီပေးခဲ့ပါတယ်. ငါအရေးကြီးသောဒေတာတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်နှင့်ပြန်လည်ကောင်းမွန်ခဲ့သည်. obg!
6 စက်တင်ဘာလ 2017 သို့ 20:19
Reginaldo Luiz de Freitas ကပြောပါတယ်:
ဂုဏ်ယူပါတယ်တေလာ, ဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့ didactic!! သငျသညျတူညီသောကောင်လေးများမှာ!
23 အောက်တိုဘာလ 2017 သို့ 11:11
3 နိုဝင်ဘာလ 2017 သို့ 16:54
Janeiro မြို့ 2017
Janeiro မြို့ 2016
Janeiro မြို့ 2013
Janeiro မြို့ 2011
Janeiro မြို့ 2010
iframe com 100% အလိုအလျှောက်အမြင့် အကြောင်းအရာပြထားတဲ့အတိုင်းသင့်ရဲ့ iframe အချို့ဖြစ်နိုင်သောဖြေရှင်းချက်သည် dynamically အမြင့် adjust. Problema Deixar um IFRAME com altura automática, ပြသအကြောင်းအရာများအဖြစ်, ထိုသို့ပြုမှရိုးရှင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အချိန် ...
Yulli Dias Tavares A, ကပြောပါတယ်: Melhor dica. Salvou minha vida!
တေလာ Lopes, ကပြောပါတယ်: sim, သူ့ဟာသူမှာ Post ဒီလိုလုပ်ဖို့ဘယ်လိုကပြောပါတယ်. အမှတ်သိကောင်းစရာ Read2;)
တဲ့ Romulus, ကပြောပါတယ်: ဒီ post ငါ့ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့ပါတယ်သျောလညျးသငျလယျကှငျးပြည့်စုံသည်အခါအလိုအလျှောက်ဖန်တီးသောအပိုဒ်ယူရှိပါကသိရှိလို. သို့. တဲ့ Romulus
Claudio Monteiro, ကပြောပါတယ်: ပြသ. ဒါဟာငါ server ပေါ်မှာရှိခဲ့ပါတယ်ပြဿနာတစ်ခုအပေါ်ဿုံအလုပ်လုပ်ခဲ့ငါ့ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့ပါတယ်.
အဲလက်စ်, ကပြောပါတယ်: ဒါဟာလမ်းဖြစ်ပေါ်စေ '' င် (လမ်းကြောင်း) သင့်ရဲ့ကို virtual စက်တွေ၏အလွတ်အာကာသပါရှိသည်. ငါတူပြဿနာရှိခဲ့ခြင်းနှင့်အာကာသယူပြီးဖြေရှင်း, နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြီးနောက်အဆင်သင့်, recoloquei အာကာသ, ဒါပေမယ့် VirtualBox ကတော့စက်တွေ၏တည်နေရာကိုမမွငျပါဘူးအဖြစ်. နမူနာ:...
Lucca, ကပြောပါတယ်: Soooo ကျေးဇူးတင်စကားလူကို. သငျသညျငါ့အသက်ကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏. ဒါဟာတူညီတဲ့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့သည်.
အန်တိုနီယို Maciel Ferre, ကပြောပါတယ်: ဒါကညာဘက်င်. ငါ cable ကိုအစားထိုးခြင်းနှင့်ကိုယ့်ညာဘက်အလုပ်လုပ်ခဲ့. ကျေးဇူးတင်စကားတွေအများကြီး. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Welvisley မွေးဖွားခြင်း, ကပြောပါတယ်: ကောင်းသောနေ့လည်ခင်း, ဖြစ်ဘူးသောအရပ်တွင်, ငါ့အချိန်အမှတ်အသား
ဘာမြှ, ကပြောပါတယ်: သငျသညျဆယ်ပါး. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ဒါကြောင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့.
မူပိုင်ခွင့် © 2017 taylorlopes.com အောက်တိုဘာလကတည်းက 2012, 1.604.931 ဝင်ရောက်ခွင့် | ယခု